Raheem Sterling Oo U Sheegay Manchester City Inuu Doonayo Inuu U Dhaqaaqo Barcelona
HomeWararka CiyaarahaRaheem Sterling oo u sheegay Manchester City inuu doonayo inuu u dhaqaaqo Barcelona
Manchester City weeraryahankeeda Raheem Sterling ayaa lagu soo waramayaa inuu u sheegay kooxda inuu doonayo inuu ku biiro Barcelona bisha January.
Laacibka heerka caalami ee dalka England ayaa weli ku dhibtoonaya inuu si joogta ah ugu soo bilowdo ka hoos shaqeynta Pep Guardiola , waxaana uu qirtay inuu u furan yahay inuu tartan cusub qaado.
Iyadoo Barcelona ay dhaawacyo badan ka soo gaareen qeybta weerarka xilli ciyaareedkan, Blaugrana ayaa lala xiriirinayay inay amaah bisha Janaayo ku qaadaneyso Sterling, inkastoo ay jiraan warar sheegaya inay ku dhibtoonayaan inay helaan mushaarkiisa .
Sida laga soo xigtay 90Min , Sterling ayaa haatan ku wargeliyay Man City inuu doonayo inuu u dhaqaaqo Barca jiilaalka – markii hore amaah – maadaama uusan fileynin inuu ku qasbo inuu dib ugu laabto qorshaha Guardiola.
Warbixintu waxa ay intaa ku dartay in Man City aysan is hortaag ku sameyn doonin Sterling si uu uga baxo, xiddigii hore ee Liverpool ayaana aaminsan in fursada uu ku xirto midabada Catalan ay tahay mid aad u wanaagsan.
Sterling kaliya labo gool iyo labo caawin ayuu sameeyay lix kulan oo tartamada oo dhan ah xilli ciyaareedkan, waxaana uu ku soo bilowday kaliya seddex kulan oo Premier League ah xilli ciyaareedka 2021-22.